မြန်မာသံတော်ဆင့်: December 2012
( Some messy issues of the Burmese ‘successor state’ )
ဘုန်းကြီးနှင့်ကိုရင် ၇၀ ကျော်မြင်မကောင်းရှုမကောင်းအသားနီလန်နေသည့်
တချို့ မျက်စေ့ပျက်သည်အထိအင်္ဂါချို့ ယွင်းသွားသည်။
ရခိုင်ပြည်၌ဘင်္ဂလီများကိုကိုင်တွယ်ထိမ်းချုပ်ရာတွင်ဤကဲ့သို့ အရေးယူခဲ့မည်ဆိုလျှင်နိုင်ငံ တကာအထူးသဖြင့်အိုအိုင်စီကဆူကြပွက်ကြမည်ဖြစ်သည်။လူခြေတိပ်ချိန်မနက်သုံးနာရီ
ပရိဿတ်ကိုမတူကွဲပြားသောအခြားပုံပြင်တပုဒ် (a different story ကိုတင်ပြောနေသည်။
သူ၏ “တရုပ်ကျေးဇူး” ဆိုသောစကားတခွန်းကားပြည်သူအကြားပြန့် နှံ့ နေကာရာဇ၀င်တွင်၍ ကျန်ရစ်လိမ့်မည်။
ဦးအောင်မင်းပြန်သွားပြီးမကြာခင်အားသုံးဖယ်ရှားမည့်သတိပေးချက်ထွက်လာသည်။ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုသတိပေးထားသည့်အတိုင်းဆက်၍လုပ်သွားသည်ကိုကြည့်လျှင် မြစ်ဆုံကိစ္စနောက်ပိုင်းအလျှော့မပေးတော့ဟူ၍အစိုးရဘက်ကစိတ်ပိုင်းဖြတ်လာဟန်ရှိသည်။
အုပ်စိုးရေးအသိုင်းအ၀ိုင်း (ruling circle) အတွင်းတင်းမာသူများ၏ဆင်ခြေကအနိုင်ရသွားပုံရသည်။
ဤသို့ ဆိုလျှင်အုပ်စိုးသူများအကြားမှာ “အတွင်းတိုက်ပွဲ” (inner struggle) တကယ်ရှိနေကြောင်းကိုသတိပြုမိစေသည်။ ။
၏အသွင်တရပ် (feature) လားဟုမေးလိုကမေးနိုင်သည်။
ဖြစ်ရပ်အားဝတ္ထုကြောင်း(narrative) အကြမ်းဖျင်းလေ့လာပြီးသောအခါပို၍ နက်ရှိုင်းသောပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေသူများအားလွှမ်းမိုးထားသောတွေးခေါ်
ယူဆပုံများ (line of thought)ကိုလှန်လှောကြည့်လိုပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အာဏာပိုင်များနှင့်အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားများ အထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်အခေါ်ခံနေသူများ၏ဤပြဿနာအပေါ်အခြေခံ တွေးခေါ်ယူဆပုံများသည်အပေါ်ယံကျောဆန်နေသည်၊ သို့ မဟုတ်ခေတ် ဟောင်းကတွေးခေါ်ပုံအတိုင်းဆက်လက်တွေးခေါ်ပြုမူနေသည်ဟုသံသယ ဖြစ်စရာများရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အစိုးရအကြောင်းပြချက်မှာနိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွား (national interest argument) ဖြစ်၏။ တကယ့်အတွင်းသရုပ်အစစ်အမှန်တွင်နအဖခေတ်စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ အစုရှယ်ယာများဖြင့်တည်ထောင်ထားသောဦးပိုင်ကုပ္မဏီ၏အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးရေးပါဝင်နေသည်။ထို့ ကြောင့် “ဦးပိုင်အလိုမရှိ”ဟု ဆူးလေဘုရားကိုပါတ်၍ဆန္ဒပြသွားသောကျောင်းသားသမဂ္ဂ
မှတ်မှတ်ရရဦးသိန်းစိန်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ နှစ်ဦးစလုံးတို့ က
ဤသည်မှာအချက်အလက်အားဖြင့်မှန်သော်လည်းသူတို့ ၏ အဆင့်အတန်းအရမပြောထိုက်သောစကားများဟုယူဆပါသည်။
ခွေးနှစ်ကောင်ကိုက်သည်မှအစကမ္ဘာစစ်ကြီးများအထိပြဿနာတိုင်းသူ့ ဘက် ကိုယ့်ဘက်စိတ်သန်ရာဘက်မှပါဝင်ပါတ်သက်ကြသည်မှာသဘာဝဖြစ်သည်။ရေးကြီးခွင့်ကျယ်လုပ်၍စကားထည်းထည့်ပြောနေရန်မလိုပါ။
စင်စစ်မြန်မာမီဒီယာသည်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကိုရော၊အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါသူတို့ နှင့် ထိုက်တန်သည်ထက်ပို၍ကောင်းချီးပေးနေချီးကျူးနေကြသည်။
ထို့ ကြောင့်မြှောက်ပေးနေတဲ့သူတွေရှိနေလို့ ဟူသောစွပ်စွဲချက်သည်တစ် ဘက်တွင်မုံရွာကတောင်သူများကိုဦးနှောက်မရှိတဲ့လူတွေဟုပြောရာရောက်သည်။ စင်စစ်တောသားများသည်မြို့သားများထက်အစိုးရကိုပိုကြောက်တတ်ပါသည်။
သူတို့ ၏ဘ၀များတည်မှီရာပျက်စီးဆုံးရှူံးနေပြီဖြစ်၍သီးမခံနိုင်ကြလွန်းလို့ သာထ၍ကန့် ကွက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ဒေသခံခေါင်းဆောင်သူအမျိုးသမီးများသည်ခေတ်ပညာမတတ်၊တောသူစစ်စစ်တွေဖြစ်သည်ကိုကြည့်လျှင်ဤအချက်သိသာသည်။
လက်ပန်းတောင်းတောင်စီမံကိန်းရပ်တန့် နေရသဖြင့်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာနှစ်သန်းဆုံးရှုံးနေရ ပါသည်ဟုဆိုသည်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းဝင်ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုကြီးများတွင်တနှစ်ဒေါ်လာ ၂၄ သန်း လောက်သည်ဘာမျှမပြောပလောက်။ တရုပ်ကုပ္မဏီကမြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် စာချုပ်ချုပ်စဉ်ကလက်မှတ်ထိုးသူဝန်ကြီးကိုပေးရသည့် kickback လောက်ပဲရှိနိုင်သည်။ သေသေချာချာဂဃနဏမပြောနိုင်သော်လည်းအကျင့်ပျက်လာဘ်စားရာ၌ ကမ္ဘာကျော်သောမြန်မာအစိုးရဟောင်းဖြစ်နေသည့်အတွက်မပြေးသော်လည်း
တစ်နှစ်လောက်စောင့်ဆိုင်းနေလို့ ဦးပိုင်နှင့်ဝမ် ပေါင်မွဲမသွားနိုင်ပါ။
ဒီမိုကရေစီစံနစ်တွင်နိုင်ငံသားများအတွက်အကျိုးမရှိလျှင်နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိနိုင်။ နိုင်ငံတော်ကိုနိုင်ငံသားများဖြင့်ဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက် ထားသည်ဖြစ်ရာနိုင်ငံသားထု၏အကျိုးစီးပွားကို
ဆန့် ကျင်၍နိုင်ငံတော်၏အကျိုးစီးပွားဟူသည်အဓိပ္ပါယ်မရှိ။ နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးပွားကိုချနင်း၍ နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားကိုမတည်ဆောက်သင့်။
[ဤအချက်နှင့်စပ်လျှဉ်း၍ ယခင်မြန်မာသံတော်ဆင့်ကတင်ပြပြီးဖြစ်သော “နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသား ဘယ်ဒင်းကပင်ရင်းမူလ” ဆောင်း ပါးကိုပြန်လည်ရည်ညွှန်းလိုပါသည်။ နိုင်ငံသားများကိုသားကောင်များသဖွယ်သဘောထား၍လိုသလိုစတေးပစ် သောနိုင်ငံတော်အမျိုးအစားကိုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်တွင်သားရဲတိရိစ္ဆန်တို့ ၏နိုင်ငံတော်
(predatory state) ဟုအမည်တပ်ပါသည်။နောင်အလျဉ်းသင့်သောအခါတင်ပြပါဦးမည်]
မည်သို့ ဖြစ်စေမဖြစ်မနေလုပ်ရပါမည်ဆိုလျှင်ဒေသခံတို့ ၏အကျိုးစီးပွား၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်ရေး၊ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာရေးအမွေအနှစ်တို့ 
(social, environmental and public emotional impact assessments)
တို့ ကိုထည့်သွင်းတွက် ချက်ပြီးမှမည်သို့ ကုစားမည်ဆိုသည်ကိုဒေသခံလူထု
အတည်ပြုလိုက်နာသင့်သည်။သို့ မှသာနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုတ်နှံ့ လာကြမည့်သူများ၏ယုံကြည်မှုကိုရနိုင်မည်ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
သို့ မဟုတ်နိုင်ငံတကာနှင့်သဘောတူစီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ
(bilateral, multilateral agreements / deals) ကိုပြောင်းလဲလာသော
အခြေအနေများတွင် review လုပ်ကြ re-negotiate လုပ်ကြသည်မှာနိုင်ငံတိုင်း
တွင်ထုံးစံဖြစ်သည်။ Re-negotiate လုပ်လိုသောဘက်၌ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိ လျှင်အခြားတစ်ဘက်ကလက်မခံပဲမနေနိုင်။ ဤအဆင့်မပြီးမြောက်မချင်း လုပ်ငန်းစပြီးသားဖြစ်နေလျှင်ရပ်ထားရမည်။ လုပ်ငန်းမစရသေးလျှင်လုံးဝ အစမပျိုးသင့်။
မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း၂၀အုပ်ချုပ်သွားသောန-အ-ဖအစိုးရသည် နိုင်ငံ တော်အာဏာ၌တရားဝင်မှုအငြင်းပွားခံခဲ့ရသော (contested political legitimacy) အစိုးရတရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအစိုးရကပြုလုပ်ခဲ့သောနိုင်ငံတကာဆိုင်ရာကတိက၀တ်များကို သက်ဆိုင်သူမည်သူမဆိုဆက်လက်၍အ တည်ပြုလိုကပြုနိုင်သည်။စောဒကတက်လိုကလည်းတက်နိုင်သည်သာ။ ဤကိစ္စကိုဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် တွင်ထည့်သွင်းပြဌန်း၍လမ်းပိတ် ထားခဲ့စေကာမူထိုအခြေခံဥပဒေသည်
1. မပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီဖြင့်ဖန်တီးထားသောဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပထမဆိုးမွေဖြစ်သည်။ [အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနှင့်ဥပဒေပြုအာဏာတို့ကိုအသားတင်ခွဲတမ်းဝင်ယူထားခြင်းကတပ်မတော်သည်ဒီမိုကရေစီ၏
2. ပြည်တွင်းစစ်အချိန်မရွေးပြန်ဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေမှရှေ့ သို့ မရွေ့ နိုင်သေးခြင်း။
(ကချင် - ကရင် - ကယား - ၀ - ရှမ်း - မွန် - ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများ)
3. တစ်ဘက်နိုင်ငံများမှပိုလျှံလူဦးရေများ(တရုပ်များ၊ဘင်္ဂလီများ) တိုင်းပြည်၏နေရာအနှံ့ အတွင်းပိုင်းဒေသများအထိသို့ စိမ့်ဝင်လာနေသည်ကိုထိထိရောက်ရောက်မတားဆီးနိုင်ခြင်း
4. နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုကတိက၀တ်များကိုပြောင်းလဲလာသောအခြေအနေနှင့် အညီပြင်ဆင်ချုပ်ဆို (modify မလုပ်နိုင်သေးခြင်း၊
5. နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းယန္တယားကြီးသည်ခေတ်ကိုနောက်ပြန်ဆွဲ ထားလိုသူဖေါက်ပြန်ရေးအင်အားစုများ၏ခံတပ်ကြီးဖြစ်နေသည်။ ခေတ်ဟောင်း၏အမွေအုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားဟောင်းအားပြုပြင်ရေး
administrative reform စ၍မလုပ်သေးခြင်း။ (လာဘ်စားမှု၊ချစားမှုများ ကိုကိုင်တွယ်ရာ၌အလွန်ညှာတာသည်။လူထုကလိုလားသလောက်ပြတ်ပြတ်သားသားမလုပ်။
စံနစ်ဟောင်းကအတိုင်းအာဏာပြနည်းဖိနှိပ်သည့်နည်း (abuse of power) ကိုသာဆက်ကျင့်သုံးနေကြခြင်း (သာအေး - မောင်ဦး - မြင့်ဆွေ )
စစ်တပ်ကဆက်၍ကိုင်ထားသောပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏လက်အောက်တွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ (လုံထိမ်းပါ)၊အကျဉ်းဦးစီးဌာန၊
စသုံးလုံးနှင့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ များရှိနေသည်။ယခုမုံရွာလက်ပန်းတောင်းတောင် ကိစ္စသည်ဤခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲအင်အားစုများကနေပြည်တော်အစိုးရ
ဆက်မတောင်းရဲအောင်အလွန်အကျွံအားသုံး (excessive use of force)
demonstration နဲ့ ချည်းသွားနေလို့ မရ။ negotiation နဲ့ သွားဖို့ လည်းလိုတယ်ဟု
မှတ်ချက်ပြုလေသည်။ နစ်နာချက်များကို demonstration နှင့်ဇာတ် လမ်းစကာဖိအားမပေးဘဲ negotiation အဆင့်သို့ ရောက်မလာနိုင်သည်ကိုကိုယ်တိုင်စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ကိုနှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးလမ်းကြောင်းဖြင့်နည်းမျိုးစုံအသုံးချ၍ဖိအားများဖန်တီးခဲ့သူက
ထိုပြင်သူမကလွှတ်တော်တွင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုတ်နှံသူများ၏ယုံကြည်မှုမပျက်ရေး၊တိုင်းပြည်၏ဂုဏ်သတင်း(reputation) ထိမ်းသိမ်းရေးကိုဇောင်းပေး၍ပြောဆိုသွားသည်။ဤကတိက၀တ်များကိုပြောင်းလဲနေသည့်အခြေအနေနှင့် readjust မလုပ်ဘဲ- နဂိုပါအတိုင်းမလိုက်နာလျှင်တိုင်းပြည်၏ဂုဏ်သတင်းထိခိုက်မည်။ နိုင်ငံကြီးသားမပီသရာရောက်မည်ဟုပြောခြင်းသည်အပေါ်ယံကျောဆန်သည်။
အထူးသဖြင့်ဤသို့ သူမ၏လွှတ်တော်အတွင်း၊ အပြင်ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုချက်များသည် မရည်ရွယ်ဘူးဆိုသည့်တိုင်အကယ်၍သပိတ်ကိုအားသုံး၍နှိမ်နင်းလျှင်သူမကကန့် ကွက် လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသူမကအစိုးရဘက်ကိုမီးစိမ်း(green light) ပြလိုက်ရာရောက်နေသည်။
ထို့ နောက်မှတဖန်ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ များ၏လက်ချက်ဖြင့်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ခါ
လက်တွေ့ တွင်ယခုလောက်အနာခံဆန္ဒပြခဲ့သည့်တိုင်အစိုးရဘက် ကတောင်းဆိုသူများ၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ ဆုံ၍ညှိနှိူင်းမည့်
(where Government is notaparty to the conflict) ကိုအစိုးရကကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးရာတွင်သာအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဥပမာရခိုင် ဘင်္ဂလီပဋိပက္ခတွင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ ပေးသည်ကို - မူအားဖြင့် - လက်ခံ၍ရသည်။
မည်သို့ ဖြစ်စေယခုအခါဦးသိန်းစိန်အစိုးရကဤပြဿနာကိုသူမ၏လက်သို့ထိုးအပ်လိုက်ပြီဖြစ်ရာသူမ၏နိုင်ငံရေးအရည်အချင်းကိုယခင်အခါများတုံးက
လိုယောင်ဝါးဝါးပြောခြင်းလုပ်ခြင်းတို့ မပါဘဲပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်နိုင်မနိုင် ပြတ်ပြတ်သားသားမြင်ကြရတော့မည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာရပ်တွင်အမွေဆက်ခံနိုင်ငံတော် (successor states များရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိ သည့်နိုင်ငံတော်အဟောင်းများ၏အမွေဆိုးများဖြစ်သည်။
စစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမဟာမိတ်များ၏ပျိုးထောင်ပေးမှုဖြင့်အသစ်ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာသောဂျပန်နှင့်ဂျာမဏီသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်များဖြစ်ကြ သည့်တိုင်ယခင်အာဏာရှင်နိုင်ငံဟောင်းများ၏ဆိုးမွေများကိုပေးဆပ်ကြရ သောအမွေဆက်ခံနိုင်ငံတော်များ (successor states) ဖြစ်လာကြသည်။
ဂျာမဏီသည်ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှဂျူး Holocaust victims များ၏အဆက်မပြတ် လျှော်ကြေးတောင်းခံမှုကိုနှစ်ပေါင်း၅၀မျှဆက်တိုက်ပေးဆပ်ခဲ့ရပြီးဝန်ကြီးချုပ်
Gerhard Schroeder ၏ညွန့် ပေါင်းအစိုးရလက်ထက် ၂၀ ရာစုအကုန်ကျမှ
လက်စသပ်သွားသည်။ ထို့ နည်းတူဂျပန်နိုင်ငံသည်လည်းမြန်မာ၊ကိုးရီးယား စသောသိမ်းပိုက်ခံနိုင်ငံများအားစစ်လျှော်ကြေး(war reparations)တွေပေးဆပ်ခဲ့ရသည်
တောင်ကိုးရီးယားဆိုလျှင်စစ်ကြီးအတွင်းလိင်ကျွန်အပြုခံရသူ များ (Comfort women) ကပါလျှော်ကြေးတောင်းခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်တွင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုတ်နှံသူများသို့ ပြုခဲ့သော စီးပွားရေးကတိက၀တ်များပြဿနာကစတင်ပေါက်ကွဲထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
တရုပ်၊တောင်ကိုးရီးယား၊ထိုင်းစသောအာရှနိုင်ငံများမှကုပ္မဏီများအား ရင်းနှီးမြှုတ်နှံ့ ခွင့်များကိုအနောက်တိုင်း၏စီးပွားရေး၊နိုင်ငံရေးပိတ်ဆို့ မှုဆန်ရှင်များအောက်တွင်မိမိတို့ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ကောတိုင်းပြည်စီးပွားရေးပါဘုံးဘုံးလဲမသွားရေးအတွက်ပါ အထူးအခွင့်အရေးများပေးအပ်၍ပြုလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်သည်။
အတွက်ရေပြင်ညီကွင်း(level playing field) တစ်ခုဖန်တီးပေး၍ပြည့်ဝသောပြိုင်ဆိုင်မှု
(perfect competition) တစ်ခုကိုကမကထပြုပေးနိုင်ခဲ့သည်မဟုတ်သဖြင့်တိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာခဲ့သည်။
ကနေ့ တိုင်းပြည်ကရင်ဆိုင်နေရသောအထွေထွေ စီးပွားရေးခေတ်နောက်ကျနေမှု၊ ၀ိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ၊ ဘာသာစကားနှင့်၊ နည်းပညာ များအဆင့်အတန်မမှီဖြစ်နေခြင်း၊ပညာတတ်များဆုံးရှူံးကုန်ခြင်း
(brain drain) တို့ သည်ဆန်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းကအဓိကဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်မှသည် ၂၀၁၀ အထိအနှစ် ၂၀ တာကာလအတွင်းမြန်မာပြည်သားများ၏ဒုက္ခမှာ
‘အောင်ဆန်း’ နှင့် ‘စုကြည်’ ကိုခွဲ၍မမြင်နိုင်ကြခြင်း၊ ‘စုကြည်’ ကို ‘အောင်ဆန်း’ ဟု ထင်မှတ်နေခဲ့ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည်။ ဤချို့ ယွင်းချက်ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကျမှသူတို့လွန်မြောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရွေးကောက်ပွဲသစ်ကိုသူမကသပိတ်မှောက်ခဲ့သည့်တိုင်
ဤသုံးသပ်ချက် (analysis) သည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြီးတိုင်ငြင်းပါယ်နေခြင်းမဟုတ်ပေ။သမိုင်းတွင်သူမ၏အခဏ်းကဏ္ဍသည်အထင်ကရနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိနေသည်ကို
မည်သူမျှမငြင်းပါယ်နိုင်။ ချို့ ယွင်းချက်မကင်း၊အကောင်းဆုံးကပြအသုံးတော်မခံနိုင်ခဲ့စေကာမူ သူမသည်စစ်အာဏာ ပိုင်များအားအဆက်မပြတ်ကြိမ်တို့ ပေးခဲ့သည့်နှင်တန်ကောင်း (whip)
တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမမရှိခဲ့လျှင်ပင်သူမ၏ နေရာတွင်အခြားသူတစ်ဦးဦးကိုသမိုင်းက ဖန်ဆင်းပေးမည်ဖြစ်သာဖြစ်သည်။
ဆက်၍အသုံးတည့် (relevant နေစေရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုပြင် (upgrade) ရမည်ဖြစ်သည်။
ဤသို့ မလုပ်ဘဲနှင့်တော့သူမမျှော်မှန်းနေသော ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲအားဖြင့် နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူနိုင်ရန်မှာမသေချာပေ။ ]
အွန်လိုင်းမီဒီယာဆိုလျှင်မိမိကမည်သို့ မျှ policing မလုပ်နိုင်သောအရာဖြစ်သဖြင့်ရန်စခြင်းဖြင့်ပို၍ဆိုးလာစရာသာရှိသည်။
အကြောင်းပြ၍တရုပ်အစရှိသောနိုင်ငံတကာကုပ္မဏီများထံသို့ - ဒေသခံတွေ မနစ်နာစေမည့်၊သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်စေမည့်အချက်များယခုထက် ပို၍တိုးချဲ့ ထည်းသွင်းလာမည့် အချက်များပါလာရေးပြန်လည်ညှိနှိူင်းမှုများလုပ်ရန်အသံပြုရန်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးသမားများအနေဖြင့်လည်းမိမိ၏ input ပေးရုံသက်သက်အနေဖြင့်
‘ထိုင်နေတာအကောင်းသား-ထသွားမှကျိုးမှန်းသိ’ ဖြစ်မည့်အပေါ်ယံကျော ဆန်သည့်စကားများမပြောမိကြဘို့ လိုသည်။
ယနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တပ်ရင်းတွေတိုးမြှင့်ချထားယုံ၊ မုံရွာတွင်မျက်ရည်ယိုဗုံး၊မီးလောင်ဗုံးများပစ်ခတ်နှိမ်နင်းယုံနှင့်ပြဿနာတွေကိုလက်စသပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်လျှင်လည်းမှားပါသည်။ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်များဆိုသည်မှာလည်းနိုင်ငံရေး အဓိပ္ပါယ်ထက်ရုံးလုပ်ငန်းသဘောပိုဆောင်နေပါသည်။ ပိုနက်ရှိူင်း၍အောက်ခြေ ကျသောဖြေရှင်းချက်များရလာအောင်လူထုအသံ --အထူးသဖြင့် - ဒေသခံ လူထု၏အသံကိုနားထောင်သင့်သည်။နိုင်ငံတကာမှအလားတူ
မုံရွာလက်ပတောင်းတောင်ကန့် ကွက်မှုနှင့်အလားတူပဋိပက္ခမျိုးတွေ မိုင်တစ်ထောင်ကျော်ရှည်လျားမည့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းမည့်
mega project တို့ တွင်တန်းစီ၍ စောင့်နေကြသည်။
အခြားအမွေဆိုးများဖြစ်သောယခုအချိန်အထိအကင်းမသေသေးဘဲအချိန်မ ရွေးပြန်လည်တောက်လောင်လာနိုင်သောပြည်တွင်းစစ်အန္တရယ်၊ တိုင်းပြည် ၏နယ်နိမိတ်များမလုံခြုံကျိုးပေါက်၍နိုင်ငံခြားသားများခိုးဝင်နေမှု၊ ယိုယွင်းနေ
သောဝန်ထမ်းယန္တယားကြီး၊ ၀န်ကြီးအဆင့်မှသည်အောက်ခြေရဲသားအထိ အဆင့်ဆင့်အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်နေဆဲစသည့်အဖြစ်များသည်အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေကြသည်။
လက်ရှိဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်တိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီနှင့်မိတ်ဆက်ပေးမည့် အပိုင်းကတိုးတက်ရေးသဘောကိုဆောင်သော်လည်းယခင်စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများ၏ အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ထားသည့်အပိုင်းကဖေါက်ပြန်ရေးဖြစ်နေသည်။
ဤအချက်ကိုတိုင်းပြည်ကအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းသာသီးခံနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအတိုင်းအတာမကုန်မီအစိုးရကဦးဆောင်၍ပြင်ဆင်သင့်ပါသည်။ လူထုကအစိုးရကိုဒရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ရသည်အထိဆိုင်းငံ့မနေသင့်။
(part of the problem) ဖြစ်နေသည်။ လူတန်းစားတရပ်၏သီးသန့် အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဘို့ ဆိုလျှင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကမ္ဘာ့သမိုင်းခေတ်မဟုတ်တော့ပြီ။
တပ်မတော်သည်ပြည်တွင်းစစ်ထည်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကမကထပြုအားထုတ်နေမည့်အစားတိုင်းရင်းသားများအပါအ၀င် အရပ်သားနိုင်ငံရေးသမားများလက်သို့ လုံးဝလွှဲပြောင်းတာဝန်ပေးသင့်သည်။
တဘက်တွင်လည်းယနေ့ တပ်မတော်ကို ၁၉၄၉၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၈၈ ခေတ်ကာလ များအတွက်တာဝန်မရှိတော့သောမျိုးဆက်များကခေါင်းဆောင်နေပြီ်။ ထို့ကြောင့်အတိပ်၏ချုပ်ကိုင်ဖမ်းစားထားခြင်းကိုခံမနေတော့ဘဲအနာဂါတ်၏
ဆွဲဆောင်ရာနောက်သို့ လိုက်ပါဘို့ အချိန်တန်ပြီ။
အခြေခံဥပဒေ၏နောက်ထပ်ချို့ ယွင်းချက်တစ်ရပ်မှာပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသ ကြီးများရှိသဘာဝသယံဇာတရင်းမြစ်များကိုဗဟိုအစိုးရကသာချုပ်ကိုင်၍ထုပ်
ယူရောင်းချနေတာ ( discretionary resource exploitation - ထို့ နောက် သယံဇာတမှနိုင်ငံခြားဝင်ငွေများကိုဗဟိုကစိတ်တိုင်းကျသုံးစွဲနေတာဖြစ်သည်
discretionary allocation of funds။ ဥပမာရခိုင်ပြည်နယ်မှထွက်သော
သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ၏၂ရာခိုင်နှူံးမျှကိုသာဒေသရင်းတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုပေးပါ လျှင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမီးလင်းပြီဆိုသောလျှောက်လဲချက် (appeal) သည်အလွန်အားကောင်းသောခံစားချက်ကိုဖြစ်စေသည်။
စီးပွားရေးတရားမျှတမှု (economic justice)ဟူသည်လုပ်ကြံဖန်တီးတီထွင် ထားသောဝေါဟာရတစ်ခုမဟုတ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီအတွက်
ကြိုတင်လိုအပ်ချက်တစ်ခု (a prerequisite) ဖြစ်သည်။
အနောက်ဒီမိုကရေစီကမ္ဘာတွင် Fiscal federalism ခေါ်တိုင်းပြည်၏အမျိုး သားဝင်ငွေကိုဗဟိုအစိုးရတစ်ဦးတည်းသဘောဖြင့်စီမံခန့် ခွဲမှုမလုပ်ဘဲပြည် နယ်အစိုးရများ၏သဘောတူညီချက်အတိုင်းခွဲဝေသုံးစွဲသည့်စံနစ်ကျင့်သုံးနေကြသည်။(မြန်မာပြည်မှချင်းတောင်လို)ဖွံ့ ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးပြည်နယ်များအ တွက်ပို၍ချမ်းသာသောပြည် နယ်များမှထည့်ဝင်ပေးသည့်အထူးပံ့ပိုးရေး ဘဏ္ဍာငွေဖြင့် Equalization Program တစ်ခုဖန်တီးပေးထားသည်။
political enlightenment ကိုအသိ အမှတ်ပြုသလိုအာဏာရှင်နိုင်ငံတော်ဟောင်းက ထားရစ်သောအမွေဆိုးများကိုရင်ဆိုင်ကိုင်တွယ်ရာ၌၀န်နှင့်အားချိန်ဆနေသည်
ကိုနားလည်ပေးနိုင်သည်။သို့ သော်နားလည်ပေးခြင်းသည်မအောင်မမြင်ဖြစ်လာ သည့်အခါခွင့်လွှတ်ခြင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးလိမ့်မည်တော့မဟုတ်ပေ။
ကျရှူံးခြင်း (failure) အားကျရှူံးခြင်းအဖြစ်သာသတ်မှတ်ကြပါလိမ့်မည်။
(ကချင်ကေအိုင်အေ - ရခိုင်ဘင်္ဂလီ - မုံရွာ-ဦးပိုင်/၀မ်ပေါင်) ရှိသည်။
၄င်းတို့ အနက်တစ်ခုမှလွယ်လွယ်နှင့်ပြီးသွားမည့်ပုံမပေါ်၊ ပို၍ကြီးထွား
ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်ရေး၊ စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးရေးသည်ထင်ရသလောက်မခက်ပါ။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်မြန်မာသည်ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီမိသားစုကြီးအတွင်းသို့ နောက်ဆုံး မှဆိုရလောက်အောင်နောက်ကျ၍၀င်လာသူဖြစ်သည် (late latecomer)
မိမိ၏ရှေ့ ၌နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုပြီးမြောက်သွားကြသော သမိုင်းလမ်းကြောင်းဆင်ဆင်တူသော၊ အရွယ်တူနိုင်ငံပေါင်းဒါဇင်နှင့်ချီ
၍ရှိနေပြီးသားဖြစ်သည်။ တောင်ကိုးရီးယား၊ တိုင်ဝမ်၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင် ၊တောင်အာဖရိက
ဂါနာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ချီလီ၊ အာဂျင်တီးနား၊ မက္ကဆီကိုစသည့်ဖြင့် Samuel Huntington ၏တတိယလှိုင်းနိုင်ငံ (Third wave countries) တစ်ဒါဇင်မကရှိကြသည်။
ယင်းတို့ ထံမှအတုယူစရာရှောင်ကျဉ်စရာအတွေ့ အကြုံများ၊
မြန်မာနိုင်ငံသားများကတကယ်လုပ်ချင်သောစိတ်ဓါတ် (Political will) သာလိုအပ်ပါသည်။
Posted by Myint Shwe at 4:51 PM0comments